kuvhuraSUSE Tumbleweed ikozvino inotsigirwa neLinux kernel 4.18 | Linux Vakapindwa muropa
Munguva yevhiki ino Douglas DeMaio akaita chiziviso, maanoburitsa pachena kuti iyo Rolling Regedzera vhezheni ye openSUSE (openSUSE Tumbleweed) yatove neLinux kernel rutsigiro 4.18.
Naizvozvo, panguva yekuita chiziviso ichi, vazhinji vevashandisi vayo vanofanirwa kunge vakagamuchira kuziviswa kwepakeji iripo uye kunyange vangadai vakatovandudza iyo Kernel yehurongwa.
Kune avo vaverengi vasingazive kuvhuraSUSE ndinogona kukuudza kuti OpenSUSE izita rekuparadzira uye chirongwa chemahara chinotsigirwa neSUSE Linux GmbH (yakazvimiririra chikamu cheiyo Attachmate Boka), uye AMD yekusimudzira uye kugadzirisa kweinoshanda system yakavakirwa muGNU.
Iyo Tumbleweed vhezheni ndeyeRolling Rinoburitsa vhezheni, ndiko kuti, mukuenderera mberi kwekuvandudza pasina nguva nenguva yekuvandudza, iyo inobvumidza vashandisi kuve neazvino software.
1 kuvhuraSUSE Tumbleweed yakagashirwa zvakagadziriswa svondo rino
2 Nzira yekugadzirisa sei openSUSE Tumbleweed?
kuvhuraSUSE Tumbleweed yakagashirwa zvakagadziriswa svondo rino
Kunyangwe paine chokwadi chekuti mwaka uno ndipo apo vagadziri vazhinji pavanotora mazuva mashoma kubva, vakomana vari kutarisira openSUSE havaregi kushanda gore rese.
Y iyo yakavhurikaSUSE Tumbleweed inoshanda sisitimu inoenderera ichigamuchira zvimwe zvekuvandudzwa kwazvino ye akati wandei eakavhurika sosi maturusi ari chikamu chegadziriro.
Zvakanaka mukati mevhiki ino kuvhuraSUSE vagadziri vakaburitsa Kernel 4.18 vhiki ino, ye openSUSE Tumbleweed iyo inounza akawanda maficha maficha.
Uye zvakare sezvakataurwa, panguva yevhiki ino mamwe magadziriso akaburitswa evhuraSUSE Tumbleweed vashandisi.
Douglas DeMaio, akataura kuti iyo yakavhurikaSUSE Tumbleweed inoshanda sisitimu yazvino inofambiswa nekernel nyowani uye iri nani kubva ku4.18 nhevedzano yeLinux Kernel uye kuti mukuwedzera kune iyo sisitimu zvakare yakagamuchira mamwe eazvino Open Source matekinoroji achiperekedzwa pamwe neichi chitsva .
En Iyi nyowani nyowani yeLinux Kernel 4.18 inotipa zvinotevera kuvandudzwa:
Pakutanga rutsigiro rweQualcomm Snapdragon 845 SoC.
Akasiyana siyana manejimendi manejimendi manejimendi e AMDGPUs.
Pakutanga rutsigiro rweNVIDIA GV100 Around iyo Nouveau DRM mutyairi.
Kuchengetedzwa kunogadziriswa kweSpecter V1 / V2 pane 32-bit ARM.
Tsigiro yemazhinji matsva machipisi.
Kuvandudzwa kwe USB 3.2 uye USB Type-C madoko.
Uye zvimwe zvakawanda shanduko.
Nezve iyo yekuvandudza, Douglas DeMaio akataura zvinotevera:
«Iyo yazvino snapshot yeiyo system, inova 20180818, yakagadziridzwa pamwe neLinux kernel kune vhezheni 4.18.0, ine shanduko zhinji dzakaunzwa ku kvm (kernel-based virtual muchina), kuwedzera kune netfilter nftables projekiti yekumisazve. pamwe neyakajairwa backend ne firewalld 0.6.1 uye ikozvino nftables uye iptables zvinogona kugarisana mushure mebugfix yekernel 4.18 'nat' tafura ".
Kumwe kuvandudzwa kwakagashira iyo sisitimu yekushandisa iyo inogona kuratidzwa mukuwedzera kune iyo yeKernel 4.18 ndeiya Iyo yekushandisa sisitimu zvakare yakagamuchira AOMedia Vhidhiyo 1 (AV1) vhidhiyo codec rutsigiro, nekuvandudza FFMpeg 4.0.2.
Mamwe mapakeji akagadziridzwa iyo ichangobva kusvika kune yakavhurikaSUSE Tumbleweed software repositories inosanganisira iyo Mozilla web browser Firefox vhezheni 61.0.2, iyo HTTP / server mutengi raibhurari ye libsoup yeGNOME 2.62.3, Xen hypervisor 4.11.0, QEMU 2.12 virtualization software. 1, Krusader 2.7 uye iyo Btrfs faira system maneja btrfsprogs 4.17.1.
Zvakare kukosha kutaura ndeye iyo ImageMagick 7.0.8.9, Strace 4.24, yast2-http-server 4.1.1 uye yast2-kuchengetedza-ng 4.1.4 mapakeji.
Nzira yekugadzirisa sei openSUSE Tumbleweed?
Chekupedzisira, kana vari vashandisi vekugovera vanofanirwa kungovimba neYaST chishandiso kuti vakwanise kuwana idzi nyowani nyowani pane yavo system pasina matambudziko.
Nenzira imwecheteyo, kubva kumagumo, unogona kugadzirisa mapakeji nemirairo inotevera:
Nezvo, ivo vanongomirira kurodha pasi uye kugadzirisa kwemapakeji kuti apedze.
Pakupera kwemaitiro aya zvese zvaunofanirwa kuita kutangidza system yako yeLinux kernel nyowani kutakurwa pamwe neyese nyowani system shanduko uye unogona kutanga yako mushandisi chikamu neaya matsva shanduko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » vhuraSUSE Tumbleweed yatove neLinux kernel rutsigiro 4.18